Ahlu Sunna oo gacanta ku dhigtay Nin isku Qarxin lahaa Munaasabad Ka Socotay Guriceel.+Sawirro - Latest News Updates
Ahlu Sunna oo gacanta ku dhigtay Nin isku Qarxin lahaa Munaasabad Ka Socotay Guriceel.+Sawirro
Wararka aan ka heleyno Degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi Maanta lagu qabtay Nin isku qarxin lahaa Munaasabad ka socotay Magaaladaas.
Guriceel ayaa waxaa lagu qabtay Munaasabad loogu baroor diiqayay Askar Ahlusunna Waljameeca uga geeriyootay dagaal geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo Galgaduud ay kula gashay dagaalamayaasha Al-shabaab.
Sidoo kale halka ay ka socotay Munaasabadda ayaa waxaa ku sugnaa Madaxda Xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir,Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Ahlusunna Waljameeca iyo Saraakiil Ciidan oo qeyb ka ah maamulka Galmudug.
Ninkaas ayaa waxaa la arkay isaga oo xiran Jaakad,isla markaana gacanta ku watay waxyaabaha qaraxa,sida ay xaqiijiyeen Saraakiil ka tirsan maamulka Galmudug,iyagoona markii dambe ka hortegay oo si deg deg ah uga furay qaraxa ku xirnaa.
Wararka ayaa intaasi waxaa ay ku daraayn in Ninkii oo isku qarxin lahaa Guriceel Ciidanka Booliska Galmudug ay ku xireen Saldhiga degmadaas.